Ekwentị foldable ga-ere nkeji nde 50 na 2024 | Gam akporosis
Ahịa ekwentị enwere ike pịa 50 nde site na 2024
Flip ekwentị kwere nkwa ịbụ otu n'ime mgbanwe na nke a 2019, mana achọtala ọtụtụ nsogbu. N'afọ a, e gosipụtawo ụdị abụọ: Galaxy Fold na Huawei Mate X. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ugbu a ka emepere ha, Samsung ga-abata n'ụlọ ahịa site na Septemba. Ọ bụ ezie na Huawei nwere ike ịmalite na November, mgbe ọ na-ata ahụhụ ọhụụ.
Ka ọ were isi nke ekwentị foldable dị n'ahịa na-aga n'ihu na-agba mgbe niile. Ọ bụ ezie na ahịa ahụ na-atụ anya na n'ime afọ ole na ole ha ga-enwerịrị akụkụ dị ịrịba ama nke ahịa ekwentị zuru oke, mana o doro anya na ọganihu ha ga-abụ nwayọ nwayọ na nke a.
Imirikiti ụdị gam akporo na-arụ ọrụ ugbu a na ekwentị mbụ ha, nke n'ọtụtụ ọnọdụ kwesịrị ịmalite na ụlọ ahịa na 2020 niile. Xiaomi, OPPO ma ọ bụ LG bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị gosipụtara ọrụ na usoro mpịachi. Ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ nweghị onye n'ime ha nyere ụbọchị maka ngwaọrụ ha.
Nke a bụ ihe na - atụnye ụtụ na nwayọ nwayọ nke ngalaba ahịa a. N'ezie, dị ka ndị na-eme nnyocha si kwuo, na 2024 ahịa nke mpịachi ekwentị gburugburu ụwa ọ ga-abụ ihe dị ka nde ekwentị iri ise. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị elu, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ nwayọ nwayọ nke dị ugbu a, anyị nwere obi abụọ ma a ga-emezu ya.
Kemgbe ihe na-erughị ọnwa anọ iji mechaa afọ, ma ọ bụ tụgharịa ekwentị nke e gosipụtara na February eruola ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ahịa dị elu nke ngwaọrụ ndị a ga-anọchite anya ihe dị mkpa breeki na evolushọn ha n'ahịa. Ọ bụkwa eziokwu na ha ga-enwe oke mmepụta na ikpe abụọ.
Yabụ, anyị nwere ike ịhụ na atụmatụ ndị a enweghị ihe jikọrọ ya na eziokwu na anyị agaghị ama ma ha ga-emecha mezuo. Nke mbu anyi gha eche yaEkwentị ndị mbụ apị apịtị gụrụ ahịa ma hụ mmeghachi omume nke ndị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na ụdị ndị a ere ere, ọtụtụ ụdị enweghị ike ịmalite ngwaọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ahịa ekwentị enwere ike pịa 50 nde site na 2024
Google Assistant na-enye gị ohere ịmepụta ihe ncheta maka ndị ọzọ
Ndị a bụ igwefoto nke Galaxy A ọzọ nke 2020 ga-enwe